अस्पतालमा कार्यरत २६ वर्षीय नर्स अनुपमा श्रेष्ठको रहस्यमय मृत्यु ! - jagritikhabar.com
अस्पतालमा कार्यरत २६ वर्षीय नर्स अनुपमा श्रेष्ठको रहस्यमय मृत्यु !
१३ पुस, खलंगा ।
जुम्लाको सिटिजन बैंक शाखा बाथरुममा नुहाउदै गर्दा बे’होस नर्सको मुत्यु भएको छ । कोहलपुर नगरपालिका -११ की २६ वर्षीय अनुपमा श्रेष्ठको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । मृतक श्रेष्ठ बिहिबार दिउँसो सिजिजन बैंकको बाथरुममा नुहाउन गएकी थिइन् ।
बाथरुममा नुहाउन गएकी उनी बे’होस भएको भन्दै सिटिजन बैंकका कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लिएका थिए । बेहास भएकी श्रेष्ठलाई प्रतिष्ठानको आइसियूमा राखिएका थियो ।
२४ घण्टा आइसियूमा राख्दा पनि हो’स नआएपछि प्रतिष्ठानले शुक्रबार साँझ मृत्यु भएको घोषणा गरेको हो । मृतक श्रेष्ठका आमा बुबाले छोरीको मृत्यु र’हस्य’मय भएको भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिने बताएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरिक्षक नरेन्द्र चन्दले प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने बताए । मृतकका आफन्तको जाहेरी अनुसार, प्रहरीले अनुसन्धन बढाउने चन्दले बताए ।
यता सिटिजन बैंकका म्यानेजर महेश शाहीले मृतक नर्स साथीको बहिनी भएकाले आफ्नो बैंकमा नुहाउन आएको बताए । ‘बैंक स्टाफ अफिसकै कामकाजमा व्यस्त थिए । बाथरुममा आएर बे’हो’स भएको थाहा भएपछि प्रतिष्ठान लगिएको हो’ शाहीले भने । बैैंकका कर्मचारी बाथरुम जाँदा ढोका बन्द थियो । ढोका फु’टा’एर उपचार गर्न लगेका उनको भनाइ छ । श्रोत कर्णाली खबर